The Irrawaddy's Blog: မူးယစ်ဆေး၊ လက်နက်ဖမ်းမိမှုနဲ့ တိမ်းရှောင်နေသူ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကို ဖမ်းမိပြီ
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့မှာ မူးယစ်ဆေး၊ လက်နက်ခဲယမ်းများ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ အမှုကနေ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေတဲ့ တရားခံလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးရဲထွန်းကျော်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့မှာ ဖမ်းဆီး ရမိပြီလို့ သိရပါတယ်။
“သြဂုတ် ၂၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့တွင် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၃ဝ၁,ဝဝဝ ပြား၊ ဘိန်းဖြူ ဘလောက်တုံး တစ်တုံး(အလေး ချိန် ၃၅ဝ ဂရမ်) နှင့် လက်နက်ခဲယမ်းများ ဖမ်းဆီးရမိသော အမှုမှ မူးယစ်ဆေးဝါးများ
ရောင်း ချခိုင်းသူ Natural Force Co.,Ltd. ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ရဲထွန်းကျော် သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ ဘက်သို့ တိမ်းရှောင်သွားကြောင်း သတင်းအရ သြဂုတ် ၃၁ ရက်တွင် မူးယစ် တပ်ဖွဲ့စု(၄၇)စစ်တွေ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ပုဏ္ဏားကျွန်း- ကျောက်တော်သွား ၅ မိုင်အကွာ ယိုးငူဆိပ်ကမ်းတွင် စုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရဲထွန်းကျော်သည် သြဂုတ် ၂၉ ရက် ညပိုင်း တွင် YGN-2E/8123 Kluger မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် အမ်းမြို့သို့ ထွက်ခွါ သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာက ဆိုသည်။
Natural Force Co.,Ltd. ကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။